UGoogle ufuna amanani amabini wamava ekubukeleni kwePixel | I-Androidsis
I-Google iya kusebenza kwi-smartwatch, okanye kwi-Pixel Watch
Isidingo sokuba ne iwatchwatch, uGoogle angasebenza njani kuyo ngokokwazi kwethu. Enye yezo zixhobo ezingakhange ziqale iminyaka kwaye kulindeleke ukuba zifikelele kuloo modeli ezenza ukuba ziyimfuneko.
Abafana abavela kwiMountain View babonakala ngathi banezinto ezicace gca ukwazi ukuba bajonge iprofayili ethile kwisibonelelo somsebenzi wento enokunxiba entsha. Into esingayaziyo kukuba banento yokwenyani emva kwezigcawu abanokuthi babethe ngayo inqindi elungileyo etafileni.
Sathetha nyani malunga nokuba iPixel Watch iya kuba yintoni kwaye siyazi ngenxa yakhe amanye amarhe asuka kunyaka ophelileyo. Nangona uGoogle engazange ayenze icace le nto iwotshi smart yayikuphuhliso ukufika ngokukhawuleza kwimarike.
Kwenzeka ntoni ngenxa yoko kwimisebenzi emitsha epapashwe yinkampani, kunokuqondwa ukuba uya kuba neprojekthi ezandleni zakhe ukuba iPixel Watch ibe yinyani.
Kwisibonelelo ukhangela ifayile ye- Usekela-Mongameli we-Hardware kunye nezoBunjineli kwizinto ezinxibelwayo ngamava abanzi ebaleni, kokubini kuyakuba yintoni kuyilo, ukukhula kunye nokusasazwa kweemveliso ezinxitywayo kuGoogle. Ngamanye amagama, bafuna umntu onamandla ngokwaneleyo ukuba angahlala neqela elikhokelela kwiGoogle Hardware ukuba ingene kwimakethi ngemveliso enkulu.
Kukho omnye umnikelo ojolise kuMphathi woYilo weWearables, nangona inkcazo isparser. Ungathini ukuba kuyacaca kuthi ukuba UGoogle uyahamba nayo ngePixel Watch, ukuba nje iyahambelana nento efunwayo yi-G enkulu ukuyisa kwintengiso kwaye ke ngaloo ndlela ijoyine uluhlu lweemveliso esele zithengisa; masingalibali yeePixel Buds.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Google iya kusebenza kwi-smartwatch, okanye kwi-Pixel Watch
Ukhuselo olukhulu lokuzikhusela ngeGhost Tower Defense
Ukucoca kunye nokuyila kwangaphambili kwe-LG K12 +